Isku-dhafan: Ku-gaarsiinta Ballanqaadka Shakhsi ahaaneed | Martech Zone
Balanqaadkii shaqsinimo ayaa fashilmay. Muddo sanado ah waxaan maqalnay waxtarkeeda cajiibka ah, iyo suuqleyda dooneysa inay ka faa'iideystaan ​​waxay ku iibsadeen xalal qiimo iyo farsamo ahaan xallisan, kaliya waxaan ogaanay xilli dambe, inta badan, ballanqaadka shaqsiyeynta ayaa ka yar qiiqa iyo muraayadaha.
Dhibaatadu waxay ka bilaabmaysaa sida shakhsi ahaanta loo arkay. Waxaa lagu xalliyaa xal ganacsi, waxaa lagu qaabeeyey muraayadaha xallinta baahiyaha ganacsiga marka runtii shakhsiyaynta ay tahay in laga hadlo qofka (haddii taasi u muuqato mid iska cad, waa sababta oo ah) Ku gelinta qof magaciisa hore emailka wax uma qabanayo baahidooda. Iyaga oo la socda iyaga oo adeegsanaya xayeysiis shey ay ka eegeen bartaada uma adeegayso baahidooda. Jaangooynta boggaaga soo degitaanka waayeen u adeegaan baahidooda, laakiin maahan haddii nidaamka taageeraya uu leeyahay kala-duwanaansho godad xogta iyo maaraynta maaddooyinka liita, arrimaha guud ee salka ku haya in badan oo ka mid ah caqabadaha shaqsiyadeed ayaa ku turunturoodo.
Mid kasta oo ka mid ah qaababkani waxay la mid yihiin suuq geynta dhijitaalka ah ee khiyaanada qolka yar, macaamiishaaduna ma aha oo kaliya inay ku dhex arkaan, iyaga ayaa ka xanaaqsan. Laakiin waxaa jira adduun ay xogta ku wargelisay, khibradaha la habeeyay ay siinayaan qiimo dhab ah macaamiisha, ka caawinta inay helaan, cilmi baarista, iyo iibsashada alaabtooda si fudud kanaalka ku habboon iyaga.
Had iyo jeer badiyaa, magacyadu waxay ku hawlan yihiin istiraatiijiyad shaqsiyadeed ka hor intaanay boos u helin inay ku guuleystaan. Riyada dhalaalaya ee dambiilo waaweeyn iyo ku celcelinta macaamiisha ayaa ka tagaysa xaqiiqo adag: iyadoo aan loo helin qaab adag oo xog iyo qaab dhismeed dhijitaal ah oo gacan ka geysan kara khibradaha qibradeysan ee omnichannel, riyadu waa inta ay waligeed ahaan doonto. Laakiin maahan inay sidan ahaato. Shakhsiyeynta ayaa guuleysan karta.
Marka sidee uga guuri karnaa waayo-aragnimo macaamiisha u reebaysa dareen la’aan (ugu fiican) una wareegeysa mid ku xiraya waxa ay doonayaan goorta iyo sida ay u doonayaan? Iyada oo isku dhafan saxda ah ee tikniyoolajiyadda iyo istiraatiijiyadda.
Samee Xogtaada Shaqeyso
Ugu horreyntii, ganacsiyada waxay u baahan yihiin inay helaan xogtooda kala sooc. Ogow anigu ma dhihin suuqyada waxay ubaahan yihiin in xogtooda lakala saaro laakiin ganacsiyada guud ahaan. Qaar badan oo suuqley ah waxay leeyihiin xog nadiif ah oo abaabulan. Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay soo-saareyaasha wax soo saarka, kooxaha calaamadaha, iyo qayb kasta oo ka mid ah ururrada leh marin u helidda xogteeda.
Kaliya khibrada macaamiisha kuma noola silo yar oo nadiif ah oo hagaagsan; waxay ka dhacdaa heer kasta iyo xilli kasta. Filashada fikradaha ku saabsan ololeyaasha dib-u-habeynta si loogu wargaliyo gebi ahaan waaya-aragnimada macaamiisha waa ciyaar nacas ah. Shakhsiyan u shaqeynta, waxay u baahan tahay in lagu dhiso waaya-aragnimada oo dhan, maahan oo kaliya hal jeex oo ka mid ah.
Taasi waxay ka dhigan tahay in ganacsigaagu u baahan yahay inuu aragti keliya ka helo macaamilka goob kasta oo taabasho ah. Isgaarsiinta Macluumaadka Macaamiisha (CDPs) way ku fiican yihiin tan, iyo lammaane lagu kalsoon yahay sida Myplanet ayaa kaa caawin kara inaad go'aamiso CDP-ga ku habboon baahidaada wuxuuna kaa caawin karaa inaad hirgeliso. Markaad jabiso sirta xogta waaxdaada, waxaad bilaabi doontaa inaad hesho aragti dhammaystiran oo ku saabsan sida khibradahaaga macmiilku dhab ahaan u egyihiin, min dhammaad ilaa dhammaad. Shakhsiyeynta maanta waxay ka ganacsataa sheekooyinka macaamiisha toosan inta badan, laakiin xaqiiqadu si dhif ah ayey u tahay mid toos ah.
Waxaad sidoo kale ubaahan doontaa inaad xeebayso xogtaada waqtiga dhabta ah (RTD) codsiyada. RTD, waxaad ku hubin doontaa khibrada lafteeda in la wanaajiyo — damaanad qaadka macluumaadka badeecada inuu cusbooneysanyahay oo howlaha raadinta ay kujiraan sida ugufiican — laakiin waa qeyb muhiim ah oo ah dhisida qaab shaqsiyeyn wax ku ool ah oo hoos udhigta Ficillada macaamiisha ee hal kanaal waa inay awoodaan inay kiciyaan falcelin astaan ​​ah kanaal kasta, oo ay kujiraan kii ay kujireen, taasna waxay suurtogal ku tahay kaliya RTD.
Keenista xogta warshadaha ee dheeraadka ah waxay kaa caawin kartaa inaad khibradaha ka qaadatid tallaabo dheeraad ah, sidoo kale. Aragtida suuq-geynta ee ku saabsan ereyada raadinta ayaa ka caawin kara go'aaminta kaliya ereyada ugu caamsan ee macaamiishaadu isticmaalayaan si ay u helaan alaab la doonayo laakiin sidoo kale ereyo is-waafajin ah oo ay la wadaagaan alaabooyinka, kuwaas oo ku soo hagaagaya markaad diyaar u tahay inaad khibrad u yeelato talooyinka wax soo saarka. .
Ugu dambeyntiina, waa lagama maarmaan in la xakameeyo xogta alaabtaada. Si loo hubiyo in khibrada uu macaamilku leeyahay khadka tooska ah midka ay ku kaydin lahaayeen, barnaamijka, adoo adeegsanaya kiosk keligiis ah, la hadalka Alexa, ama nooc kasta oo nooc kale ah oo astaantaadu ay la macaamili karto dhagaystayaashaada, waxaad u baahan tahay inaad haysato mid kasta oo ka mid ah baraha taabashada ee ku xiran xarunta xogta dhexe. Mar labaad, khadka hoostiisa markaad diyaar u tahay inaad abaabusho safar macaamiil shaqsiyeed, xogta la waafajiyay waxay laf-dhabar u noqon doontaa khibradahaas.
Ka faa'iideysiga xogta si wax ku ool ah ayaa kaa caawin doonta inaad khibrad weyn ka dhigto, laakiin inaad ka dhigto xogta sida ugu fiican uguna fiican oo loo hubiyo inaad gaarsiinayso waayo-aragnimo knockout kanaal kasta, waa inaad tixgelisaa inaad qibradeyso khibradaada. Qaab dhismeed aan madax lahayn (ka soo qaadista khibradaada dhamaadka-dhamaadka qaab-dhismeedka dhabarka) maahan qof walba, laakiin in badan oo ka mid ah qaabdhismeedka qaabdhismeedka ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagula jaanqaadi karo heerka isbeddelka farsamada.
Iyadoo aan la helin tiknoolajiyadda ugu fiican ee awood u siinaysa qayb kasta oo waayo-aragnimo ah, way adkaan kartaa in khibradaas loo qaado heerka ku xiga ee abaabulka. Si loo ganaaxo safarka macaamilka ee wada-hadalka wadahadalka ee u keenay astaantaada, waayo-aragnimada khadka tooska ah ee ay wax badan ka bartaan wax soo saarkaaga, iyo ugu dambeyn iibsashada barnaamijka waa mid aad u adag in la sameeyo haddii aad ku shaqeyneyso dhabarka monolithic -sii daayo taas oo aan si fiican ula ciyaarin dadka kale.
Isku dubbaridi kara Myplanet waxay bixisaa qaab qaab dhismeed oo kuu oggolaanaya inaad ka faa'iideysato khibradahaaga ganacsi. Ka faaideysiga qaababka e-commerce ee la caddeeyey iyo teknoolojiyada ugu fiican fasalka, Composable wuxuu kugu qalabeeyaa qalabka si aad u abuurto xalka omnichannel run ah oo ku noolaan kara ballanqaadka shakhsi ahaaneed: xog buuxda oo isku xiran oo kaa caawineysa inaad go'aamiso waxyaabaha ay macaamiishaadu doonayaan; maarayn maaddooyin dabacsan si ay awood kuu siiso inaad ugu gudbiso waxyaabahaas qaybaha dhagaystayaasha saxda ah; iyo aasaaska qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka si uu ula kobco ganacsigaaga, isagoo la jaanqaadaya fursadaha cusub ee suuqa markay soo baxayaan.
Monoliths waxay leeyihiin booskooda, iyo haddii bixintooda ay udhacdo baahidaada sifiican, waxaad kujirtaa qaab wanaagsan. Laakiin sida muuqaalku u soo baxayo, waa wax aad u adag in la arko sida xalka hal-abuurnimada uu u sii wadi doono bixinta wax kasta oo summad u baahan tahay si loogu guuleysto, loona bixiyo heerka ugu sarreeya ee laga heli karo suuqa. Awoodda xulashada iyo xulashada xalalka la yimaada qaab-dhismeedka qaabdhismeedka micnaheedu waa marka ay wax u wareegaan meheraddaada - qaab cusub oo aad rabto inaad gasho, kanaal cusub oo aad u baahan tahay inaad qayb ka ahaato - tiknoolajiyadda taageerta ganacsigaaga ayaa hadba isu beddeli karta.
Fiiri kor u kaca suuqyada sanadihii ugu dambeeyay ee 2-3. Goobaha suuqyadu waxay u soo bandhigi karaan qiime-dhab ah macaamiisha. Dukaameeyayaashu waxay ku heli karaan wax kasta oo ay u baahan yihiin hal meel oo, iyo gunno dheeraad ah, waxaa laga yaabaa inay kasbadaan dhibco daacadnimo ah ama badbaadin karaan kharashka dhoofinta isla waqtigaas. Waxaa intaa dheer, waxay u furaan fursado waxyaabo ay ka mid yihiin talooyinka wax soo saarka ee dhameystirka ah ee kor u qaadi kara khibradooda wax soo saar ama sii fududeyn kara khibradooda wax iibsiga, labadaba waxay xitaa siiyaan qiimo aad u macquul ah macaamiisha. Faa'iidada ganacsi ee tikniyoolajiyaddani waxay ku saleysan tahay macaamilka macaamilka waxayna si toos ah ugu xirmaysaa qaab shaqsiyeyn wax ku ool ah - waxaa jira sabab ay suuqyadu dhawaan uga baxeen.
Laakiin isku dayga ah in xal suuqa la galiyo madal horay u jirtay waxay noqon kartaa caqabad. Tiknoolajiyad kasta oo cusub waxay qaadan doontaa shaqo si ay u saxdo, laakiin ku soo bandhigida tiknoolajiyad cusub nidaam-dhismeedka monolithic jira ayaa ku xigi kara wax aan macquul ahayn. Xal kasta wuxuu leeyahay shaqo iyo waqti iyo lacag ku lug leh. Dabacsanaanta habka ugu wanaagsan ee ugu fiican, ayaa si kastaba ha noqotee, macnaheedu yahay in waqtigaas oo dhan iyo shaqada iyo lacagta aan lumin doonin khadka marka aad u baahato inaad la qabsato si aad ula kulanto dalabaadka macaamiisha.
Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed kuma noolaan ilaa iyo xayeysiinta illaa iyo hadda, laakiin way awoodaa. Waxaan kaliya u baahanahay inaan ka caqli badnaano sida aan u isticmaalno tikniyoolajiyadda awood siineysa. Waxaan u baahanahay inaan aasaas adag u dhigno isticmaalka xogta maxaa yeelay waxay hoosta ka xariiqeysaa dhinac kasta oo shaqsiyan ah, waana inaan hubinaa in qaab-dhismeedka aan ku tiirsanahay si aan u taageerno qaab shaqsiyeed si dhab ah u taageeri karo. Tan ugu muhiimsan, waxaan u baahanahay inaan diirada saarno istiraatiijiyadyada ku saleysan adeegsadaha. Istaraatiijiyad kasta oo shakhsi ahaaneed oo ganacsiga ka dhigeysa mid ka horreysa baahida isticmaale-yaasha ayaa u diyaar garoobaya inay hoos u dhacaan oo ay fashilmaan
Codso Demo isku dhafan
Tags: CDPisku dhafanMadal Macluumaadka Macaamiishaecommerceshakhsiyeynta ecommercemyplanetomnichannelshakhsi ahaaneedistaraatijiyad shaqsiyeedxogta waqtiga-dhabta ahShakhsiyeynta waqtiga-dhabta ahrtd
Jason Cottrell waa aasaasaha iyo agaasimaha guud ee Myplanet, istuudiyaha naqshadeynta softiweerka oo ku takhasusay sameynta aalado khibrad dijitaal ah oo loogu talagalay dukaamada omnichannel, shirkadaha ecommerce, telecom, raashinka, iyo noocyada kale ee caalamiga ah.